भीम रावलले भर्खरै गरे यस्तो डरलाग्दो निर्णय, एमालेमा खैलाबैला, अब के गर्छन ओली ? - jagritikhabar.com
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलल नयाँ घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झोँक्किदै नयाँ घोषणा गरेका हुन् । १९ मिनेटको अन्तरमा सामाजिक संजालमा दुई वटा ट्वीट गर्दै उनले ओली प्रवृत्तिको आलोचना गरेका हुन्।
नामलिस्ट तयार पार्नेबहरुले ओलीनिकट मान्छेहरु मात्रै हालेको भन्दै महाधिवेशनमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बिहान १० बजेदेखि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा सहमतिका लागि भन्दै बन्दसत्र रोकिएको छ । सञ्चारकेन्द्र बाट